Filtrer les éléments par date : lundi, 16 septembre 2019
lundi, 16 septembre 2019 22:39
On ne peut qu'admirer, fenomanana
lundi, 16 septembre 2019 22:36
Fanadiovana ny canal des Pangalanes: Nahita maso ny loto ny Filoham-pirenena
Efa manomboka ny fanadiovana sy fanalana ny fasika sy atsanga ao anatin'ny Canal des Pangalanes, izay natomboka avy aty Toamasina.
Tsy mahavita 500m akory, dia mikatso ny helice 2 mampandeha ny milina, fa feno fako, pneu, gony. Miditra an-tsehatra ireo mpijoboka anaty rano manala izany. tsy lasa alavitra akory, dia feno fako indray, dia toy izany hatrany.
Hitan'ny rehetra ihany koa ny menaka maloto, ny gazoil maimbo, sy ireo fako ary loton'ny ozinina, ariana ao anatin'ity lakandranon'ny Pangalanes ity. Na ireo olo-be an-tanàna aza dia efa tsy mahateny ireto tompon'orinasa vavety manary loto tsy manaja tontolo iainana ity, ka dia samy mifampibisibisika sisa hoe, efa hitan'ny Filoham-pirenena izy io, ka mety izy sisa no ahateny sy anasazy ireo mpandoto ny rano izay misy misotro, sy midio aminy io.
Ny trondro dia maty ho azy, nefa mbola amidin'ny olona ihany, ka efa any ambilany vao heno maimbo pétrole sy gazoil, savony, ary menaka maloto.
Mitaraina mangidihidy ihany koa ireo mponina manodidina amin'ny fampiasana ny rano.
lundi, 16 septembre 2019 15:56
Entre Ambatofitorahana et Camp Robin en direction de Fianarantsoa.
lundi, 16 septembre 2019 15:16
Fifaninanana hidirana IST Antananarivo: Sanganehana ireo tanora vao hiatrika bakalôrea 2019
Hotanterahina ny alarobia 23 sy alakamisy 24 oktobra 2019 ny fifaninanana hidirana taona voalohany ao amin’ny Institut supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T).
Hifarana amin’ny sabotsy 21 septambra 2019 amin’ny mitatao vovonana ny fisoratana anarana amin’ity fifaninanana ity.
Bakalorea no diplaoma farafahakeliny takiana amin’ny mpifaninana, ary 25 taona raha zokiny indrindra. Ekena hifaninana anefa ireo tanora vao hiatrika bakalôrea amin’ity taona 2019 ity, saingy misy taratasy fenoin’izy ireo.
Sanganehana ireto tanora vao hiatrika bakalôrea 2019 ireto, izay maro no maniry hanohy fianarana eny amin’ny IST-T. Hatao ny 30 septambra 2019 ka hatramin’ny 04 oktobra 2019 ny adina an-tsoratra ho an’ny bakalôrea sokajy ankapobeny, sy ny andiany voalohany (Première série) ho an’ny sokajy teknika. Hitohy ny 07 oktobra 2019 ka hatramin’ny 10 oktobra 2019 ny « Deuxième série » ho an’ireo mpiadina bakalôrea sokajy teknika sy teknôlôjika.
lundi, 16 septembre 2019 14:56
Depiote kandida Ben’ny tanàna: Afaka miverina depiote raha tsy voafidy ho Ben’ny tanàna
Moana ny lalàna manoloana ireo solombavambahoaka mirotsaka hofidiana Ben’ny tanàna ka tsy voafidy, nefa mbola anatin’ny fe-potoana iasany. Ny hany ambaran’ny Lalampanorenana, ao amin’ny andininy faha-71, dia tsy azo ampirafesina amin’ny asam-panjakana, na olom-boafidy hafa ankoatra ny asa fampianarana ny maha solombavambahoaka.
Azo atao didy fakan-tahaka anefa ny tranga tao Fianarantsoa tamin’ny 2015. Solombavambavambahoaka amperinasa voafidy tao Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania, avy amin’ny MAPAR, Razanamahasoa Christine, no narotsak’io vovonana politika io ho kandida Ben’ny tanànan’ny Kaominina ambonivohitr’i Fianarantsoa tamin’ny fifidianana natao ny 31 jolay 2015.
lundi, 16 septembre 2019 14:26
Manamboninahitra andiany faha-40: 28 nisafidy ny Tafika Malagasy, 27 nisafidy ho Zandary
Nisafidy ny Tafika Malagasy ny 28 tamin’ireo manamboninahitra andiany faha-40, nivoaka avy ao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe, ary nisafidy ho Zandary kosa ny 27.
Natao ny alakamisy 12 septambra 2019 teo ny fanamafisana ny safidin’izy ireo.
Nanambara ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena tamin’ny lahateniny fa « tokony hanana fahendrena, fitondrantena mendrika, fahaiza-manao amin'ny maha-miaramila ny tsirairay, ary indrindra ny fanajana ny Ambaratonga isan-tsokajiny ».
lundi, 16 septembre 2019 13:16
Rallye Tour de Tanà: Nibata fandresena i Fred sy Andry Tahina nitondra Subaru Impreza
Nifarana omaly ny Rallye Tour de Tanà nokarakarain’ny Asa Tana. Andiany faha-19 ny tamin’ity, 30 ny fiara nandray fiaingana. Niala an-daharana avokoa ny androatokony.
Nibata ny fandresena i Fred sy Andry Tahina avy amin'ny klioba ASACM, nitondra Subaru Impreza, narahin’i Rivo sy Ando (FMMSAM - Subaru Impreza). Ny ekipazy Sitraka sy Rado (FMMSAM - Subaru Impreza) no teo amin’ny laharana fahatelo.
lundi, 16 septembre 2019 13:11
Sera fiara CRAFTER: Mahatsiaro tena voasoloky ireo mpividy
Nitady fiara "CRAFTER semi-vitré" (mitovitovy amin'ireny sprinter ireny fa VW) ity mpandraharaha iray, ka nanao filazana tamin'ny tambazotra-tserasera facebook izany filany izany.
lundi, 16 septembre 2019 08:31
Helikôptera tetsy Mahamasina: Hotsaraina anio ireo mpanao gazety namoaka vaovao sy Tale iray ao amin’ny CUA
Niteraka resabe an-gazety, tamin’ny haino aman-jery sy tambazotran-tserasera sôsialy ny fanenjehan’ny fanjakana mpanao gazety telo mianadahy sy Tale iray ao amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, noho ny famoaham-baovao nataon’izy ireo mikasika ny fitsofohan’ny helikoptera an’ny Tafika tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina tamin’ny 30 aogositra 2019 iny.
lundi, 16 septembre 2019 08:30